I-Invisible Thread / Fishing Twine // I-Monofilament Fishing Line
Yenziwe ngezinto ezibonakalayo ze-nylon polymer esebenza kahle kakhulu. Inezinzuzo zokubonisa obala okuhle, amandla aphezulu, ukuzinza okuhle kwamafutha, ukumelana kahle kokugqwala kanye nokwakheka okulula, ukuqina kwesimo, ukuqina okuncanyana kokuqina, ukufakwa kukagesi okuhle nokumelana nokuguga, okungeyona ubuthi futhi kuyiphunga.
Intambo ye-MH nylon inezincazelo eziphelele ngekhwalithi ethembekile futhi ukulethwa okusheshayo futhi ingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende. (njengekhwalithi, umbala, isisindo, ukufakwa, njll.) ukuze ihambisane nezidingo ezahlukahlukene zemakethe
Ukucaciswa: ubukhulu 0.08-3.0mm
emasakeni: imvamisa igcwele nge-spool epulasitiki, isigaxa, ishubhu noma i-skein, ku-2g-5000g
Ngenxa yamandla ayo aphezulu, isicwebezelisi esiphakeme, ukuphakama okuphezulu, imicu ye-MH nylon ithandiwe ngabakhi bemfashini, isetshenziswa kabanzi e-sequin embroidering, umgubuzelo, izicathulo zezemidlalo, izembatho zendabuko, imvunulo ye-arab.
Ibuye ibe yintambo ejwayelekile kakhulu yokudoba, ikakhulukazi ekuqineni kwe-0.1mmmm-0.6mm. Umdobi angakhetha ubukhulu nobukhulu obufanele ngokusho kwamanzi ahlukene kanye namagiya okudoba.
I-0.15MM 200G Nylon Thread
I-0.12MM 200G Nylon Thread
I-0.2MM 200G Nylon Thread
I-0.1MM 200G Nylon Thread
I-1.2MM 100Y Nylon Thread
I-0.25MM 100Y Nylon Thread
I-0.9MM 100Y Nylon Thread
I-0.8MM 100Y Nylon Thread
I-0.6MM 100Y Nylon Thread
I-0.5MM 100Y Nylon Thread
I-0.3MM 100Y Nylon Thread
I-1.1MM 370G Nylon Thread